Nooca Warqaddayda Muddada ku qor Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Nooca ugu Wanaagsan ee Waraaqdeyda ah Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sida loo Dalbo Waraaqdayda Muddada
Waa hab fudud oo fudud in laga dalbado nuqul noocaaga ah ee waqtigaaga ah ee waraaqaha ah ka dibna nuqul cusub laga dalbado maktabadda. Markii aad dalbaneysid nuqul warqad erey bixin ah waxaad dalbaneysaa dhowr nuqul oo loo diraayo maktabado ama kulliyado kala duwan sidaa darteed dhammaantood waxay yeelan doonaan nuqulo ka mid ah warqaddaada muddada.
Maktabaddu ma awoodi doonto inay aqbasho dhammaan waraaqahaaga amarka koowaad. Si loo helo waraaqda loogu soo qaaday si ku habboon waqtiyada maktabadda ma qaadaneyso oo keliya amarka laakiin waxay rabaan inay arkaan warqadda ka hor intaysan aqbalin. Marka waraaqdaada la aqbalo markaa dib ayaad u laaban kartaa oo aad dalban kartaa nuqulo badan intii loo baahdo.
Maktabado badan ayaan lacag ka qaadin nuqul warqad ah oo horeyba loo helay, si kastaba ha noqotee, waxay kugu soo dalacayaan nuqul shaqsiyeed. Haddii aad dalbato nuqul kaaga ah warqadda, waxay ku siin doonaan lacag la'aan. Si kastaba ha noqotee, haddii warqadda lagu soo bandhigo dugsigaaga sida caadiga ah waxaa loo heli karaa oo keliya daawashada saacadaha qaarkood.
Markaad hesho warqadda, waxay ku siin doonaan tilmaamo ku saabsan sida loo dalbado. Maktabaddu dhab ahaantii ma keeni doonto warqadda, maadaama aysan garan doonin meel ay dhigaan. Adiga ayaa taas sameyn doona.
Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad maskaxda ku hayso ka hor intaadan dalban warqaddaada. Ugu horreyntii waxaad u baahan tahay inaad ogaato inta bog ee uu warqaddu yahay. Haddii warqaddu aad u dheer tahay ama haddii ay jiraan bogag badan markaa way ku kici kartaa wax ka badan haddii aad dalbatid hal bog. Dalbashada warqad dheeri ah waxay sidoo kale u baahan kartaa lacag dheeri ah iyo lacag kale.
Haddii aad ku dalbato warqadda khadka tooska ah, ma aha inaad bixiso khidmad dheeri ah maxaa yeelay iyaga ayaa lagu soo dallacayaa adeegga. Markaad dalbaneyso khadka tooska ah waa inaad siisaa magaca hay'addaada ama magaca kulliyaddaada. Sidoo kale waa inaad keentaa magaca qofka mas'uulka ka noqon doona in warqaddaada la dhigo.
Nidaamka dalbashada warqaddu waxay umuuqan doontaa mid la mid ah tan dalbashada maktabadda marka laga reebo inay jiri doonaan dhowr talaabo oo dheeri ah oo ku lug leh. Mar alla markii aad dalabkaaga sameyso markaa waa muhiim inaad hesho warqaddaada waqtigeeda si loo hubiyo in si habboon loo soo bandhigo. Waxa kale oo muhiim ah in la siiyo qofka warqadda siinaya kaarka boostada oo sharxaya waxaad u qabato baahiyahooda diiwaangelinta.
Waxaa jira waxyaabo kale oo yar oo maskaxda lagu hayo ka hor intaadan dalban warqaddaada. Maskaxda ku hay in warqaddu ay diyaar ahaato marka aad dalbanayso haddii aysan ahaynna waxay ku dallacayaan lacag dheeraad ah adeegga.
Dugsiyada badankood waxay kaa rabaan inaad dalbato warqadda ugu yaraan soddon maalmood ka hor si markaa warqadda loo diyaariyo. Marka waraaqda la dalbado markaa adeegga waxaa laga qaadi karaa xafiiska weyn ee iskuulkaaga ama maktabadda. Adeeggan waxaa badanaa sameeya qof shaqaale ah ama kaaliye arday ah.
Sidoo kale waa inaad awood u yeelatid inaad ku dalbato warqadda khadka tooska ah. Maktabadaha badankood waxay bixiyaan adeeggan laakiin way ka duwanaan kartaa xarun kasta. Hubso inaad fahamtay shuruudaha kahor intaadan dalban warqaddaada.
Waraaqaha badankood waxaa laguugu soo diri doonaa dhowr maalmood gudahood. Haddii shaqsi ahaan loo keenayo warqadda waxay qaadan kartaa laba illaa saddex maalmood.
Haddii aad ka dalbatid khadka tooska ah markaa waa inaad awoodi kartaa inaad lacag dhigato. Maaddaama aysan warqaddu u soconaynin xeradaada, maahan inaad lacag ku bixiso keenista mana bixin doontid kiro qol. Waxaad sidoo kale ku keeni kartaa warqada sanduuqaaga boostada haddii aad qol ku leedahay halkaas.